5 Magaalooyinka Xisbiga ugu Fiican Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Magaalooyinka Xisbiga ugu Fiican Yurub
Qalcadaha Yurub iyo jidadka soo jiidasho iyo meelahu waxay dejin u noqdeen sheekooyin la yaab leh kumanaan sano. Ilaa maantadan yurub waa udub dhaxaadka xisbiga ee adduunka. Waa xuska xafladaha loogu talagalay safarka ka yimaada adduunka oo dhan safarka bachelor iyo bachelorette. Sidaas, Waxaan si taxadar leh u xushay kuwa ugu wanaagsan 5 magaalooyinka xafladaha Yurub ee fasaxa iyo fasaxa duurjoogta ah.
Berlin si Amsterdam, baararka burburka loo tago habeenka ugu weyn qaarada Yurub, by safarka tareenka ama kubad boodboodka, Ku adkee suunka kursiga safarka ugu dheer weli.
Safarka tareenka waa wadada ugu wanaagsan ee saaxiibtinimo ee loogu safro Yurub. Maqaalkani waxa uu ugu qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, The Bogagga Tikidhada Tareenka ee ugu Jaban Adduunka.
1. Xaflad ka dhacday Berlin, Germany
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu saaxiibka badan Yurub, Berlin waa hoyga farshaxanka, fannaaniin, iyo DJ-ga adduunka ugu fiican. Taariikhdeeda iyo dhaqankeeda ayaa saameyn ku yeeshay kala-duwanaanshaheeda iyo qaab furan oo furan, taas oo macnaheedu yahay in wax kastaaba dhacaan. Sidaa darteed, Berlin waa magaalada ugu wanaagsan uguna wanaagsan Yurub.
Naadiga Berlin iyo goobta xafladu caadiyan waxay bilaabmaan goor dambe oo mugdi ah. Hadaad rabto inaad la kulanto nolosha habeenkii ee Berlin sida reer Berliner, xirxiro kabo raaxo leh, Xidhmo caadi ah oo timaada Jimcaha. Ku soo qaado cabitaan mid ka mid ah baararka badan ee ku yaal Berlin una gudub aagga warshadaha.
Naadiyada ugu wanaagsan ee ka jira magaalada Berlin waa kuwo ku qarsoon aagga warshadaha ee Berlin iyo wadooyinka tareenka. Isu diyaari xaflad aan waligeed istaagin, ama istaago kaliya marka ninka ugu dambeeya uu istaago. Habeenada naadiga Berliners waxay bilaabataa sidii hore 1 waxaan ahay Sabtida ilaa Axada habeenka. Tani waxay xaqiiqdii Berlin ka dhigaysaa magaalooyinka ugu xiisaha iyo xamaasada badan Yurub iyadoo dalxiisayaal iyo naadiyo safraya oo ka kala yimid adduunka oo dhan.
Waa maxay Cawayska Habboon ee Ugu Fiican Magaalada Berlin?
Haddii aad ka badan tahay 48h ka qaybqaadasho oo aad waqti u hesho hal naadi oo keliya, markaa iska hubi inaad xafladda ka dhacdo Berghain. Tikniyoolajiyada ugu wanaagsan iyo dhawaqyada guryaha ayaa dhagxin doona dabaqa qoob-ka-ciyaarka dhammaadka usbuuca dhammaadkiisa.
2. Xafladda Budapest, Hungary
Inta lagu jiro maalinta iyo saacadaha qoraxdu, Budapest waa daah faneed quruxsan oo leh qurux badan iyo qaab dhismeedka dhismaha. Sidaad u warwareegtay hareeraha waddooyinka, indhahaagu si uun bay ula socon karaan ka dib calaamadaha ugu quruxda badan Yurub. laakiin, habeenkii waxaad ogaan doontaa adduunyo kale, adduunyo dhismeyaal guuldarro leh waxay u rogaan baararka Yurub ee aan caadiga ahayn, iyo muuqaalkan gaarka ah wuxuu gelinayaa Budapest 5 magaalooyinka xafladaha ee ugu wanaagsan Yurub.
Mugdi kadib, meel banaan, Meeshu aysan anshax iyo xeerar midna lahayn, Waxyaabahaas waxaa waajib ku ah inay duurjoogta noqdaan.
Muxuu Yahay Habeenki Ugu Fiicnaa Budapest?
Beerta fudud waa Budapest's bar icon burburka degmada 7 iyo qaybta sare ee labyrinthine-ka iyo booqashada ay tahay in la booqdo waayo-aragnimo naxdin leh gaar ahaan habeenkii xafladaha Budapest.
3. Xaflad ka dhacday Prague, Czech Republic
Prague waa mid kamid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. Inta lagu jiro maalinta waxaad dareemi doontaa inaad dib ugu soo noqotay wakhtigii qalcadaha, amiirrada, iyo sheeko mindiyo, laakiin inta lagu jiro habeenkii waxaad waqti u safartaa nolosha waalan, halkaas oo caqabadaha looga tegay albaabka gadaashiisa.
Magaalada waxaa ka buuxa beero beero leh oo webiga ag yaal, pubs, iyo baararka leh aragtiyo yaab leh oo magaalada ah iyo dabcan goob caan ah oo naadi ah.
Muxuu Yahay Habeenki Ugu Fiicnaa Prague?
Prague waxay hoy u tahay naadiga ugu weyn Yurub, 5-sheeko Naadiga Karlovy Lazne. Sidaas, haddii aad qorsheynaysid safar aad ugu socoto Prague asxaabtaada ama Eurotrip si aad u baarto magaalooyinka ugu fiican Yurub, markaa kani waa mid waajib ku ah inaad joojiso kasbashadaada. La soco mar alla markii aad gasho albaabka naadiga, Waxaad ka bixi kartaa qof gabi ahaanba ka duwan Wax kasta oo ka dhaca Prague, joogaa Prague.
4. Xafladda Amsterdam, Netherlands ayaa
Wuxuu caan ku yahay kanaalkeeda quruxda badan iyo dukaamada, Amsterdam waa Yurub caan ah halka loo aado fasaxa. Waxay leedahay fiil aad u deggan, in kasta oo ay caan ku tahay degmada nalalka casaanka ah iyo dukaamada qaxwaha.
In kasta oo Nederland ay door biddo shirar muhiim ah, hadaad weydiiso dalxiisayaal ka kala yimid daafaha dunida, waxay dhihi lahaayeen Amsterdam waxay leedahay dhinac kale. Marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee ku yaal magaalooyinka ugu xafladaha wanaagsan Yurub, Amsterdam, waxaad ka heli doontaa dhawaaqyada riyada ee naadiyada badankood, laakiin sidoo kale music live. Bandhigyada tooska ah ayaa caan ka ah Amsterdam.
Muxuu Yahay Habeenki Ugu Fiicnaa Amsterdam?
Kaliya qaar ka mid ah naadiyada miyuusigga ee ugu wanaagsan ayaa ah Melkweg iyo Bimhuis, iyo meelaha lagu caweeyo ee habeenkii ugu wanaagsan waa De Marktkantine iyo Hoyga.
5. Xaflad ka dhacday Vienna, Austria
Magaalada aan dhammaanteen u naqaanno hab-dhaqankeeda aan caadiga ahayn iyo nolosha dhaqanku waxay sidoo kale leedahay nolol qurux badan oo habeennimo leh. Ka soo horjeedda muuqaallada habeenkii lagu caweeyo ee dalalka deriska ah, goobta nolosha ee Vienna waa saaxiibtinimo badan oo deggan. Tusaale ahaan, khidmadda laga soo galo Vienna way hooseysaa iyada oo siyaasadaha albaabku nasanayaan.
In Vienna, inta badan waad ka heli kartaa naadiyo farsamo, laakiin sidoo kale qaababka dhulka hoostiisa iyo aashitada naadiyada qaarkood.
Muxuu Yahay Habeenki Ugu Fiicnaa Vienna?
Xisbiyada tikniyoolajiyada ugu wanaagsan waxaad tagtaa Das Werk iyo Grelle Forelle. Haddii aad rabto naadiggu gurguuro ka dib u gudub dhinaca Gurtel, waddo dhex marta bartamaha magaalada. Halkaas ayaa ah meesha aad ka heli karto inta badan baararka iyo naadiyada isku xidhan. Hubso inaad fiiriso Venster99.
Elektro Gonner ayaa tusaale weyn u ah nolosha habeenkii ee Vienna. Waxay ku yaalliin dukaan koronto ku shaqeeya, sidoo kale waxay u tahay meel loogu talagalay rakibidda fiidiyowga iyo muusikada elektaroonigga ah. Barta bidix ee bidix waxay ku taalaa dusha sare ee Sofitel Vienna Stephansdom leh qorrax-soo-dhacyo cadceedda iyo aragtida magaalada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qeybaha Yurub
Waa maxay Xilliga ugu Fiican in la Qibloodo Nolosha Habeenkii ee Yurub?
Guga iyo dayrta hore waa xilliyada ugu wanaagsan ee lagu safro laguna ogaado magaalooyinka ugu wanaagsan Yurub.
Waa maxay Range Qiimaha Ujrada Galitaanka Goobaha Cawayska Yurub?
Khidmada gelitaanku way ku kala duwan tahay waddan ilaa waddan. Inta badan magaalooyinka Yurub waa dad aad u jaban, tusaale ahaan, Prague iyo Budapest, 5-20 gelitaanka euroda iyo qamriga qiimo macquul ah, meelaha qaarkood qaalisan yihiin, laakiin waxa ugu muhiimsan, goor hore ayaa timid, sidaa darteed ma aha inaad saf dheer gasho.
Waa maxay Magaaladu u leedahay Habeenkii ugu Fiicnaa Yurub ee Sannadka Cusub iyo Kirismaska?
Magaalada ugu wanaagsan ee xafladaha ciidda masiixiga iyo sannadka cusub waa hubaal Berlin haddii aad safar ku tageysid a miisaaniyadda dhagan. Amsterdam iyo Prague waa kuwo qurux badan xilliga qaboobaha, laakiin xoogaa qiime ah.
Si aad u soo gabagabeyn, Yurub waxay leedahay wax ay ku siiso dhadhan kasta, rabitaan, heerka xumaanta, iyo miisaaniyadda. Korkeenna 5 Magaalooyinka xafladu waxay bixiyaan waxa ugu fiican adduunka oo dhan. Xaqiiqdii waad ku bilaabi kartaa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiiboobka ah, dhamaan hal habeen. Si aad u sarreysaa dhammaantood, magaalo walba si sahlan ayaa loo gaari karaa via tareenka safarka, sidaa darteed haddii ay tahay riyadaadii ugu fiicneyd ee aad ku qabsan laheyd xaflad waali ah isbuuc dhammaana dhammaan soo booqo 5, markaa Yurub ayaa sugaysa.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tikidhada tareenka ugu raqiisan mid kasta oo ka mid ah magaalooyinka xafladaha qurxoon ee liiskeena ku yaal.
Miyaad dooneysaa inaad ku dhejiso bartayada internetka "5 Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / fr si / de ama / es iyo luuqado badan.
AmsterdamParty xisbiga berlin budapestparty nolosha europenightlife xisbi-wadaag cawayska xisbiga PragueParty TravelVienna viennaparty